Mpitsara 14.1-20 : MANOHITRA NY FANANGOLEN’NY SATANA
Mpitsara 14.1-20F.5MANOHITRA NY FANANGOLEN’NY SATANAMiambina. Hatrany am-bohoka dia efa voatokana ho an’Andriamanitra i Samsona. Niomana sy nanomana azy ho amin’izany ny ray aman-dreniny. Indrisy anefa fa dia lavon...
Mpitsara 13.1-25 : FIFIDIANANA MANOKANA
Mpitsara 13.1-25F.1FIFIDIANANA MANOKANAVaovao tsara. Tsy vao izao akory no nahitana vehivavy momba niteraka tato amin’ny Baiboly fa efa nanomboka tamin’i Saraha vadin’i Abrahama, ary mbola nisy koa taty aoriana dia...
Mpitsara 12.1-15 : ADY AN-TRANO
Mpitsara 12.1-15F.2ADY AN-TRANOManao ahoana ny fahitanao ny fahombiazan’ny namanao ?Manimba ny fialonana (1-3). Tamin’ny fitsaran’i Gideona koa dia efa nanao izao fihetsika izao ny Efraimita (Mpitsara 3). Nibata ny...
Mpitsara 11.29-40 : FANDRESENA NIAFARA TAMIN’NY FAHORIANA
Mpitsara 11.29-40F.2,6,7FANDRESENA NIAFARA TAMIN’NY FAHORIANAManao ahoana ny lanjan’ny voady hatao eo anatrehan’Andriamanitra? Nomery 30.2-3, Deoteronomia 23.22-23.Fandresena niezinezina. Inona ny fanalahidin’ny fa...
Mpitsara 11.1-28 : NY TOETRY NY OLONA
Mpitsara 11.1-28F.2NY TOETRY NY OLONALehilahy mahery fo i Jefta (1). Azo lazaina koa anefa, fa be fandeferana manoloana ny sotasota vokatry ny fialonana sy ny fitiavan-tenan’ireo zanakalahin’ny Gileada izay nandroa...
Mpitsara 10.1-18 : TSY NAHATSINDRY NY FANAHINY ANDRIAMANITRA
Mpitsara 10.1-18F.5TSY NAHATSINDRY NY FANAHINY ANDRIAMANITRAFandriampahalemana: Nitsara ny Isiraely nandritra ny 23 taona i Tola ary 22 taona i Jaïra izay nandimby an’i Tola. Tsy nisy fanamarihana manokana ny zava-...
Mpitsara 9.42-57 : IZAY AFAFY NO JINJAINA
Mpitsara 9.42-57F.6IZAY AFAFY NO JINJAINANamono sy nandringana : Izany no ataon’i Abimeleka tantaraina eto amin’ity ampahan-dahatsoratra ity. Efa voalaza teo aloha fa namono ny rahalahiny rehetra izy, 70 no isany f...
Mpitsara 9.22-41 : FETRA
Mpitsara 9.22-41F.5FETRAAndriamanitra Tsitoha. Telo taona nanjakana ny mpanjaka Abimeleka. Tonga kosa teto ny fotoana nitsaharan’ny fanjakany, ary Andriamanitra mihitsy no niditra an-tsehatra tamin’izany (23). Andr...
Mpitsara 9.1-21 : TETI-DRATSY
Mpitsara 9.1-21F.2TETI-DRATSYMpanjaka. Izy no lohany, ambony, mandidy, manapaka, manam-pahefana. Lalina loatra ny fanirian’i Abimeleka ho eo amin’izany toerana izany. Teto dia nampiasa tetika izy hahatonga azy ho l...
Salamo 50.16-23 : TSY FANAJANA NY FANEKENA NATAO
Salamo 50.16-23F.4TSY FANAJANA NY FANEKENA NATAO Lalina ve ny fifandraisanao amin’Andriamanitra sa ivelany fotsiny ihany ?Eo imolotra (16-21). Ireo ratsy fanahy izay itenenan’Andriamanitra eto, dia mahafantatra ny...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...203